MR MRT: ဘုရားပွဲ
"ရာဟုလာ ဓမ္မသင်တန်းကျောင်း အတွင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဇိနဒါယာဒ အောင်ဆုပြည့် စေတီတော်ကို ဒုတိယအကြိမ် ပူဇော်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲ။"
"တစ်နှစ် တစ်ခါ၊ ငရဲရှာ၊ လူ့ရွာ ဘုရားပွဲ။"
(ငရဲ . . . . .)
"တစ်နှစ် တစ်ခါလား။ တစ်လ တစ်ခါလား။"
(တစ်နှစ် . . . . .)
"တစ်နှစ်မှ တစ်ခါဆိုတော့ နည်းသေးလား"
"တစ်နှစ်တစ်ခါ ငရဲရှာကြတာ . . . ဘယ်ရွာမှာလဲ။ ဒီ စိုင်ပြင်ရွာမှာလား"
"လူ့ရွာမှာ။ လူ့လောကမှာ. . . ဖြစ်နေကြတာ။ ငရဲရှာကြတာ။ ဘုရားပွဲဆိုပြီး ကကြခုန်ကြ၊ ပျော်ကြပါးကြ၊ စားကြသောက်ကြ၊ မူးကြရူးကြ ရိုက်ကြ နှက်ကြ ရန်ဖြစ်ကြ။ ကုသိုလ်ရမှာလား ငရဲ ရမှာလား။"
"ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ် လူဖြစ်ဖြစ် ပုထုဇဉ်တွေမှာ ကုသိုလ်ကို ပယ်လို့ မရဘူး။ အကုသိုလ်လည်း ဖြစ်တာပဲ။ ငရဲကြီးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကုသိုလ်များပြီး အကုသိုလ်နည်းအောင် ကြိုးစားကြရမယ်။"
"တစ်နှစ်တစ်ခါ၊ ကုသိုလ်ရှာ၊ တို့ရွာ ဘုရားပွဲ။"
"ဒီဘုရားပွဲမှာတော့ ကုသိုလ်ရှာတဲ့ ဘုရားပွဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြ။ ကုသိုလ် ရဖို့အတွက် . . . . . ပင့်သံဃာ (၁၀၈)ပါးကို လှူကြတာ . . . စာရေးတံမဲ သိန်းငါးဆယ်လောက်နဲ့ ဆွမ်းဆန်။ မိုးထက်ကျော် မိသားစုတို့ ဘုရားဒကာမို့ ပင့်သံဃာတွေကို တစ်ပါးတစ်သောင်း လှူရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ မခိုင်းဘူး။ ဆွမ်းကပ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ မခိုင်းဘူး။ ဝင်းရတနာ မိသားစု အချိုပွဲ ကပ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ မခိုင်းဘူး။ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် လှူကြတာ။ စတုဒိသာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံဖို့ ဆီလှူကြ၊ ဆန်လှူကြ။ သင့်ရာသင့်ရာ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ကိုယ်လှူကြတာလည်း ကိုယ့်အသိနဲ့ ကိုယ်လှူကြတာ။ စာရေးတံမဲတွေ စုပေါင်းလှူကြတယ်၊ လိုတဲ့ စာရေးတံမဲတွေကို ချင်းတွင်းမိသားစုက ဖြည့်စွက်လှူတယ်။ ဒါလည်း ကိုယ့်အသိနဲ့ ကိုယ်လှူတာပဲ။"
"ဒီဘုရားပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဟုလာကျောင်းတိုက်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ . . .။ အာရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်း အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်လှူဒါန်းကြတာ၊ ဦးစိန်မင်း မိသားစုတို့လို နေရာအခက်အခဲ မရှိရအောင် ကျောင်းဆောက်ကြတာ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဘယ်သူမှ ခိုင်းလို့ လုပ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်အသိနဲ့ ကိုယ်လုပ်ကြတာ။"
"အလိုက်သိတာ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတာ။ သူများပြောလို့ သိတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဟာကိုယ် သိတယ်ဆိုတာ . . .။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်အနန္တထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဆိုတာ ဒီသဘောပဲ။ သယမ္ဘူဉာဏ်ရဲ့ အခြေခံက ဒါပဲ။"
သိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား . . . . .။"
"သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဂုဏ်တော်။ ဘုရားပွဲရယ်လို့ လုပ်ကြပြီဆိုရင် ဘုရားဂုဏ်တော် တစ်ခုခုတော့ အောက်မေ့သင့်တာပေါ့။ ဒါမှ . . ."
"တစ်နှစ် တစ်ခါ၊ ကုသိုလ်ရှာ၊ တို့ရွာ ဘုရားပွဲ။"
"မြတ်စွာဘုရား သစ္စာလေးပါးကို သိတာက သူများပြောလို့ သိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာက သင်ပေးလို့ သိတာ မဟုတ်ဘူး။ သယမ္ဘူဉာဏ်နဲ့ သိတာ။ ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းပြီး သိတာ။"
"ပြောမှ သိ၊ ထိမှာ နာ၊ သာမှ နေ၊ သေမှ ခင်၊
ဤလေးအင်၊ လူတွင် မကျင့်ရာ။"
"မပြောလည်း သိရမယ်။ လောကမှာ . . . မရှိတာထက် မသိတာ ခက်တယ်။ ဘယ်လိုလူဟာ ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ဘာပြောသင့်တယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုရင် ဘုန်းကြီးစကား၊ ဘုန်းကြီးအလုပ် . . . လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာ၊ ပြောသင့်တာ မပြောသင့်တာ . . . ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် သိတတ်မှ။ လူ ဆိုရင် လူ့အလျှောက်။ သူဌေး သူဌေးအလျှောက်၊ ဆင်းရဲသား ဆင်းရဲသားအလျှောက် . . . ကိုယ်အခြေအနေကိုယ် သိမှ။"
"မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ သယမ္ဘူဉာဏ်လောက် အဆင့်မမြင့်ပေမယ့် ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် အလိုက်သိဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်အတိုင်းတာနဲ့ကိုယ် သယမ္ဘူဉာဏ် ရှိဖို့လိုတယ်။"
"ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် သင့်တော်ရာ တာဝန်ယူပြီး ကုသိုလ်ပြုကြတယ်။ ကုသိုလ်ရှာကြတယ်။ နှစ်စဉ် ပြုကြရမယ့် ကုသိုလ်။"
Posted by Ashin Acara. at 9:21 AM